Daawo Qaabka ay Hablaha u Codsadaan in Horay Loogu Siigaliya Daabka - Hablaha Media Network
HMN:- Ugaarsiga meelaha gabadhu ay ka kacsato ayaa ragga qaar waxa ay ka raadiyaan meelo kale iyo markaa rabi in ay ka maqsuudiyaan inanta markaa uula ciyaarayo.
Salaaxa iyo istiiminta faraha badan ayaa waxa ay yihiin gogol xaarka hardanka sariirta iyada qofba qofka kale ku dadaalayo in ugu hagarbaxo macaanka ciyaartaasi.
Qanjirka ay habluhu sifiican wax ugu dareeemaan kaas oo loo yaqaan G-spot waxaa uu door muhiim ah ka qaataa habsami usocodka guuxa dareenka ku dhisan ee ka dhaca sariirta dusheeda, ma aha inantu in ay meel un sida meeydka oo kale iska taalo laakin, waxaa looga baahanyahay inantu ay sameyso weerar iyo weerar celis si ay isug dhiinto ciyaarta.
Xiliga Guuxa uu Jiro (c)baashaal
G-Spotkaasi waa maxay muusa kasameeysan yahay kaga bogo XARIGGAN:- G-spot.
Badhanka ugu muhiimsan ee uu raadiya ugaarsade kasto kaa oo dadaal dheeri ah u gala habkii uu ku heli lahaa badhanada sahlen oo sida fudud ugu qaadato lamaantiis.